Editorial aprily 2015 | FJKM Amboniloha
Editorial aprily 2015
Ampahatsiarovina manokana amin’ity volana Aprily 2015 ity ny nanehoan’Andriamanitra miharihary ny Fitiavany ka nahatongavan’i Jesoa Kristy tety ambonin’ny tany : Hanome FIAINANA MANDRAKIZAY ho an’izay rehetra mino Azy (Jao.3, 16)
Ho anao izay mamaky ity lahatsoratra ity : tonga ho anao koa Jesoa Kristy. Nitondra ny fahotanao teo amin’ny Hazo Fijaliana Izy, maty nisolo ny helokao ary nandresy ny fahafatesana ka nitsangana tamin’ny maty hitondra Fiainana be dia be ho anao. Andriamanitra Velona ny Andriamanitrao ary manome fahavelomana ho an’izay mino Azy ka mandray ny Famonjena vitany. Aoka ho Ilay Zanak’Andriamanitra Velona no hany Tompo sy Mpamonjy anao raha te hahita ny tena Fiainana Marina ianao. Izy mantsy no « Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana ». Tsarovy fa Mahery ny Andriamanitrao ; Tsitoha Izy ka na ny fahafatesana sy ny Fiainantsihita aza tsy nahazona Azy fa noreseny (Asa.2, 27.28). Matokia Azy sy ny Heriny fa mahavonjy anao amin’ny herin’ilay ratsy izy. Ampy ho anao ny Fahasoavany. Atolory Azy ny fonao, ny fiainanao rehetra. Avelao hanjaka aminao sy ny tontolo misy anao Izy dia ho hitanao izany Fiainana be dia be feno fiadanana izany.
Onena ny Tompo mahita ny olony mbola sondriana amin’ny fanompoana andriamani-kafa izay miseho amin’ny endrika maro samihafa toy ny fanompoana razana (famadihana…), kanefa koa mivavaka miantso ny Anaran’Andriamanitra sady manao ny asa fanompoana an’Andriamanitra any am-piangonana (manompo tompo roa). Fa dia nahoana re no mbola any amin’ny maty no itadiavanao ny velona hatramin’izao e ! Aza hadinoina fa tsy misy fahavelomama ao amin’ny maty fa fahafatesana no ao. Aza gaga ianao raha toa ka maka endriky ny fahafatesana hatrany ny fiainanan’ny olona manompo andriamani-kafa. Fiainana sandoka no hita ao fa tsy Ilay Tena Fiainana ao amin’i Kristy Velona Ilay efa nandresy ny Fahafatesana.
Raha mahatsiaro ho lavitra ny Tompo ianao. Ankehitriny, miantso anao ny Tompo Ilay mbola tia anao hiverina Aminy. Ilaozy ny fanompoana ny fahafatesana izay fitak’i Satàna, fa mifidiana ny Fiainana dia Jesoa Kristy : « Mifidiàna ny Fiainana mba ho velona hianareo….Satria Velona Aho dia ho Velona koa hianareo (Deo.30, 19 ; Jaona14,19). Ary rehefa manompo an’Andriamanitra dia tena manompoa Azy amin’ny fifaliana ka atolory ho Azy feno ny aminao rehetra fa aza zarazaraina amin’ny fanompoana andriamanin-kafa na izao tontolo izao izay mandrafy an’Andriamanitra. Tianao ve Andriamanitra ? Manompoa Azy amin’ny fonao rehetra, amin’ny sainao rehetra, amin’ny herinao rehetra ary amin’ny fanahinao rehetra.
Mikatsaka fiainana tsaratsara kokoa ve hianao ? Ao amin’i Jesoa Kristy misy FIAINANA MAHARITRA MANDRAKIZAY feno FIADANANA (Jao.20, 21). Ampandrosoy eo amin’ny fiainanao Izy. MATOKIA fa miahy anao amin’ny lafi-piainanao rehetra Andriamanitra raha manaiky hanjakany ianao (Izy miahy ny fiainanao eto an-tany sy ny mandrakizainao). Efa natsangany ho zanany tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy Izay efa noraisinao ho Tomponao ianao ; Zanany sady asan’ny tanany ianao ka adidiny ihany araka ny teniny. Toky tsy mamitaka ny Teniny, azo antoka. Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Apetraho Aminy ny fanahianao rehetra.
Marina fa tsy maintsy misy ny sedra lalovan’ny mpino mpanara-dia an’i Kristy kanefa MAHEREZA « Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazony ny Fiainana mandrakizay ; fa ho amin’izany no niantsoana anao sy nanaovanao fanekena teo imason’ny vavolombelona maro… » Momba anao Jesoa Ilay efa nandresy izao tontolo izao.. Aoka hivavaka sy hivelona amin’ny Teniny hatrany ianao ary meteza hotarihin’ny Fanahin’Andriamanitra izay ao anatinao, miasa ary mitarika anao sady mampandresy anao tahaka Azy…
Catégories :	Editorial	/ par AnjGab 24 avril 2015